यसरी ऋणमा डुबे 'मेलोडी किङ्ग' ढकाल । कुराकानी सहित । – Namaste Filmy
[dropcap]च[/dropcap]लनचल्तीको लोकबोली हो, ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने ।’ हुन पनि, आय र व्ययको तालमेल मिलाउन सकिएन भने करोडपतिबाट रोडपति हुन बेर लाग्दैन । सामाजिक प्रतिष्ठा पनि गुम्छ । सायद आय र व्ययको यही अनुपात मिलाउन नसक्दा नेपाली सुगम संगीतका ‘मेलोडी किङ’ मानिने गायक रामकृष्ण ढकाल ठूलो आर्थिक विवादमा फसेका छन् ।
कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका ढकाल आफ्नो स्वरकै कारण मनग्य नाम र दाम कमाउन सफल भए । कुनै बेला सबैभन्दा धेरै कमाउने कलाकारको अग्रपंक्तिमा पर्ने ढकालले घर किन्न एक सहकारीसँग लिएको ऋण समयमै चुक्ता गर्न नसक्दा आफू र जमानी बस्ने श्रीमती नीलम शाहको तीनपुस्ते विवरण र फोटोसहितको सूचना पत्रिकामा तीनपटक प्रकाशित भयो । पछिल्लोपटक ललितपुर-३, पुल्चोकस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले २५ जेठमा एक राष्ट्रिय दैनिकमा ऋण चुक्ता गर्न १५ दिने हदम्याद दिँदै उनका नाममा लिलामी सूचना प्रकाशित गर्‍यो । यसअघि ११ साउन र २ माघ ०७० मा लिलामी सूचना प्रकाशित भएको थियो । यसो हुँदा एकातिर उनी आर्थिक रूपमा निकै कमजोर रहेको हल्ला चल्न थालेको छ भने अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा उनीप्रतिको आमदृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ, फ्यानहरूलाई दुःखी तुल्याएको छ । उनकै शब्दमा भन्दा करबि ३० वर्षे करिअरमा ढकाल सबैभन्दा ठूलो मानसिक तनावमा फसेका छन् ।
तनावको यो गाथाको सुरुआत हुन्छ, ४ फागुन ०६६ बाट । त्यस दिन ढकालले ललितपुर सैबु-८ स्थित नौ आना क्षेत्रफलमा बनेको आलिसान बंगला खरदि गर्न लालीगुराँस सहकारीसँग १ करोड ८० लाख रुपियाँ ऋण लिए । पाँचवर्षे समयसीमा र १८ प्रतिशत ब्याजदरमा सहकारीले घरको मूल्य बराबरकै कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । उनले त्यसअघि बूढानीलकण्ठमा बैंकबाट ऋण लिएर घर किनेका थिए । त्यो घर १ करोड ३० लाखमा बेच्ने, त्यसबाट करबि ७० लाख बैंकको ऋण तिर्ने र बाँकी पैसा सहकारीलाई बुझाएर साँवा घटाउने योजनामा थिए उनी । त्यसैले सहकारीसँग महिना दिनभित्र ५० लाख रुपियाँ फिर्ता गर्ने मौखिक सम्झौता गरे । तर, दुर्भाग्य ! त्यही बेला घरजग्गाको कारोबार ओरालो लाग्यो । उनले न समयमै भनेजति मूल्यमा घर बेच्न सके, न सहकारीको किस्ता बुझाउनै ।
किस्ताको के कुरा, ब्याज पनि तिर्न सकेनन् । सहकारीसँगको सम्बन्ध बिगि्रयो । सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार पहिलो किस्तास्वरूप पाँच लाख लिन पनि चार महिना कुर्नुपर्‍यो । त्यसयता ढकालले सातपटक गरी ४८ लाख रुपियाँ मात्र सहकारीलाई बुझाएका छन् ।
साँवा र ब्याज बुझाउन नसकेपछि ढकाल घर किनेको ६ महिनाबाटै आत्तिन थाले । त्यही घर बेचेर भए पनि ऋण तिर्ने ध्याउन्नमा लागे उनी । तर, भनेजति मूल्यमा बिक्री भएन । समयमै ब्याज नबुझाएपछि वित्तीय नियम अनुसार ब्याज पनि साँवामा गाभिँँदै गयो, जसले ऋणको भार अझ बढ्यो । त्यसैले करबि अढाई वर्षपछि उनले धितो राखेको घर नै छाडे र भैँसेपाटीस्थित विनायक कोलोनीमा बसाइँ सरे । “घर किन्न लिएको ऋण तिर्न पैसा नहुने तर नयाँ घर किन्न र ६-६ महिनामा गाडी फेर्नचाहिँ कहाँबाट पैसा आउँछ ?” सहकारीका निर्देशक भण्डारी भन्छन्, “कतिसम्म भने हामीलाई घर छाडेको जानकारीसमेत दिइएन ।”
नियम अनुसार १ करोड ७० लाख मूल्यांकन गरेर सहकारीले ढकालको उक्त घर सकारसिकेको छ । तर, यसले पनि ऋण असुली भएन । पछिल्लो सूचनामा साँवा, ब्याज र अन्य दस्तुर १५ दिनभित्र चुक्ता नगरे सहकारी ऐन, २०४८, सहकारी नियमावली, २०४९ र संस्थाको ऋण लगानी र असुलीसम्बन्धी विनियमावली अनुसार ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानी बस्ने व्यक्तिको चल-अचल सम्पत्तिबाट र निजहरूको घरघरानाबाट समेत असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । यो सूचना प्रकाशित भएको तीन साता नाघिसकेको छ तर अझ ढकाल सहकारीको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् । त्यसैले सहकारी कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यति गर्दा पनि ऋण असुली नभए उनलाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै सहकारीले सहकारी तथा गरबिी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नेछ । निर्देशक भण्डारी भन्छन्, “सहकारीको पैसा कुनै अमूक व्यक्तिको होइन, १८ हजार सदस्यको पसिनाको कमाइ हो । त्यसैले हामी जसरी पनि ऋण असुली गर्छौं ।” उनका अनुसार अहिले ढकालले करिब १ करोड ८५ लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ ।
ऋण विवादकै सन्दर्भमा छुटाउन नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, उनको विलासी, सोखिन र अति महत्त्वाकांक्षी स्वभाव । उनका निकटस्थहरूका अनुसार ढकाल र उनको परिवार निकै सोखिन र खर्चालु छ । मोजमस्तीमा पनि पैसा खर्च हुन्छ । “पैसाको बन्दोबस्त नभई त्यति महँगो ब्याजदरमा झन्डै दुई करोड ऋण लिएबाटै उनी कति महत्त्वाकांक्षी र विलासी छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ,” ढकालनिकट एक मित्र भन्छन्, “उनलाई आफ्नो लोकपि्रयता र कमाइ ओरालो लागेको हेक्का भएन । दैनिक खर्च पनि घटेन । त्यसैले ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।” आर्थिक व्यवस्थापनमा उनी निकै कच्चा भएको ती मित्रको भनाइ छ । तर, ढकाल यो कुरा स्वीकार्दैनन् ।
त्यसो त ढकालले चाहने हो भने सहकारीसँगको ऋण विवाद तत्काल सल्टने सम्भावना पनि छ । किनभने, उनी सम्पर्कमा आए ‘हदैसम्म’को छुट दिने योजनामा छ सहकारी । यदि ढकालले सहयोग गरेमा सहकारीले चक्रिय ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने भण्डारी बताउँछन् । तर, ढकाल सहकारीको सम्पर्कमा नआएकै डेढ वर्ष बितिसकेको छ । उनी भन्छन्, “आफैँ संस्थासँग भागीभागी शक्ति केन्द्र धाउने अनि पत्रिकामा नाम निकालेर बदनाम गर्‍यो भन्न कसरी सुहाउँछ ?” तर, गायक ढकाल भने यो आरोप ठाडै अस् वीकार गर्छन् । उनी त सहकारीले आफूलाई अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । “एउटा सर्वसाधारण त भागीभागी हिँड्न सक्दैन भने म त सेलिबि्रटी, कसरी सम्भव छ ?” उनको प्रश्न छ । यो विवादले निकै मानसिक तनाव दिएकाले चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाउने पक्षमा छन् उनी । तर, सहकारी ऋण मिनाहा नगर्ने र ढकाल नतिर्ने मुडमै रहेकाले यो विवाद साम्य हुन मुस्किल देखिन्छ ।
‘मलाई टर्चर दिन्छन्’ – रामकृष्ण ढकाल
लालीगुराँस सहकारीसँग तपाईंको खास विवाद के हो ?
सभार: गोकर्ण गौतम, इकान्तिपुर डटकम ।
बलिउड इन्ट्री गर्ने तयारीमा प्रियंकाकी बहिनी बार्बी ।